လေနုအေး: September 2008
Posted by တန်ခူး at 12:34 PM 37 comments:
ဂျေညီညီက ချစ်သူကို လွမ်းလို့ချစ်သူနဲ့ထိုင်နေကျ ကဖေးဆိုင်လေးဆီ နေ့ တိုင်းသွားထိုင်သတဲ့။ အလွမ်းကဖေး။ ကျွန်မက မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတော့ မြန်မာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ရောင်းတဲ့ အဲဒီ ကုန်စိမ်းဆိုင်လေးကို ပိတ်ရက်တိုင်း သွားတယ်။ အလွမ်းကုန်စိမ်းဆိုင်။ ကဗျာတော့ သိပ်မဆန်ဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုင်လေးက မြန်မာတော့ ဆန်တယ်။ ရောင်းတဲ့ လူကြီးက သူကိုယ်တိုင် မြန်မာ မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာလူမျိုး ၀ယ်သူလာရင် မင်္ဂလာပါတဲ့။ ကဲ… ဒီထက် မြန်မာဆန်ဦးမလား။ ပြီးရင် မြန်မာလို ပြောပြီး ၀ယ်လိုက်ရုံပဲ။ ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ ပေါက်ပန်းဖြူ၊ ဒန့် သလွန်ရွက်၊ ဒညင်းသီး က အစ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း အဆုံး ရောင်းသူက မြန်မာလို မေးတယ်။ ၀ယ်သူကလဲ မြန်မာလို ပြောလိုက်ရုံပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာတွေ့ ရခဲတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေါ့။ ကုလားလူမျိုးတွေ လာဝယ်ရင် ကုလားလိုပြော တရုတ်လူမျိုးတွေ လာဝယ်ရင် တရုတ်လိုပြော မလေးလူမျိုးတွေ လာဝယ်ရင် မလေးလို ပြော။ ဘာသာစကား တော်တော်များများကို လေ့လာထားတဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က စင်္ကာပူ တရုတ်လူမျိုးပါ။
ဇီးဖြူသီးကြီးတွေ လှမှလှ။ ဇီးဖြူသီးလေးထောင်းစားမလား။ ဒါမှမဟုတ်… လုလု ချက်နည်းလေး အတိုင်း ငါးမြင်းဇီးဖြူသီးချက်လေး ချက်စားမလား။
ကင်းပုံသီးလေးတွေကို မျှစ်လေးနဲ့ပုဇွန်ခြောက်လေးနဲ့ကြော်စားလဲ ထမင်းမြိန်သား။ ဒန့် ဒလွန်သီးကတော့ ငါးဖယ်နဲ့ဆီလည်ရေလည်လေး ချက်လဲကောင်း၊ သီးစုံချဉ်ရည်လေး ချက်လဲ ကောင်း၊ ပဲကုလားဟင်းလေး ချက်လဲကောင်းမို့ကျွန်မက အပတ်တိုင်း ၀ယ်ဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ တော ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့မျှစ်လေးကို ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့တောချက်ချဉ်ရည်ဟင်းလေး ချက်ဖို့ချဉ်ပေါင်ရွက်လေးလဲ ၀ယ်။ ကုလားအော် ငရုတ်သီးထောင်းလေးနဲ့ ဆို ခပ်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့ထမင်းအလွန်ဝင်။ (အိမ်က လူတွေ အတွက်ပါ။ ကိုယ်ကတော့ အစာအိမ် သမားမို့ငရုတ်သီးနား မကပ်နိုင်တာ ကြာပေါ့)
ဒညင်းသီးကြီးတွေက အလုံးထွားမှထွား။ ဒညင်းသီး စေးစေးလေးကို ခပ်ပြားပြားလေးထု အုန်းနို့ ချက်လေးများ ဆမ်းစားလိုက်ရလို့ ကတော့။
ခရမ်းသီး၊ သရက်သီး၊ ပူဒီနံ၊ ပေါက်ပန်းဖြူ၊ သခွားသီး… အတို့ အမြုပ်ကလဲ စုံပါ့။ အသိမြန်မာ တယောက်ကတော့ ငှက်ပျောအူတွေ ၀ယ်သွားလေရဲ့။ အင်း… အိမ်လည်သွားလို့ ကတော့ မုန့် ဟင်းခါး စားရမှာ သေချာတယ်။
ဗူးသီးလေးတွေက နုနုချိုချို။ အိမ်က အမျိုးသားက ကြက်သား ကာလသဟင်းကြိုက်တာမို့ဗူးသီး တလုံးလဲ ၀ယ်ဖြစ်တယ်။
နံနံပင် ငါးမူးဖိုး လို့ မြန်မာလို ပြောဝယ်လိုက်တော့ အားတော့ရသား။ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်ကတော့ ၀ယ်စရာမလို ဖောက်သည်မို့အမြဲအဆစ်ရတယ်။ တခါတလေ မြင်းခွာရွက်တွေ၊ ပဲလင်းမြွေသီးတွေတောင် အဆစ်ပေးတတ်သေး။ အမေနဲ့မနက်ဈေးအတူ ၀ယ်နေကျ မနက်ခင်းတွေ လွမ်းတိုင်း ဒီကုန်စိမ်းဆိုင်လေးကို ရောက်ဖြစ်တယ်။
Posted by တန်ခူး at 12:38 AM 35 comments:
Posted by တန်ခူး at 11:39 AM 17 comments:
“တာတေ… မနက်ဖြန် စာမေးပွဲကို ခုထိ ဂေါ်လီရိုက်နေတုန်းလား… ခုစာအုပ်ယူပြီး အိမ်လာခဲ့”
ကျွန်မ အပြင်သွားတုန်း အခွင့်အရေးကို အပြတ် အသုံးချနေသည့် တာတေ။ ၈ တန်းကျောင်းသားက ၅ တန်း၊ ၆ တန်း ကလေးတွေနဲ့ ဂေါ်လီ ရိုက်ဖော်။ ဘယ်တော့မှ အပူအပင်မရှိ။ ခဏကြာတော့ မြန်မာစာ စာအုပ်တွေနှင့် နှေးနှေးကွေးကွေး ၀င်လာသည်။
မေးခွန်းတပုဒ်ကို မေးလိုက်တော့ ကျွန်မကို ခပ်ငူငူကြည့်နေသည်။ မနက်ဖြန်ဖြေရမှာ ခုထိ ငူငူငိုင်ငိုင်။ ကျွန်မ စိတ်တွေ ပူလိုက်တာ မပြောပါနဲ့ ။ နောက်တပုဒ်မေးတော့လဲ ဒီအတိုင်း။ သူကတော့ အေးအေးဆေးဆေး။ ကျွန်မက ပြာနေပြီ။ မနေ့ ကတင် ကျွန်မနဲ့ နွှေးတုန်းက ရသေးသည်။ ဒီနေ့ မေ့ပစ်သည်။ စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
“နင် ဂေါ်လီရိုက်နိုင်တာ ငါအံ့သြတယ်… ခုပြန်ကျက်… တပုဒ်ချင်း င့ါဆီပြန်ဆို”
သူ့ ကို ပြောရင်း စိတ်တွေက အရမ်းပူလာတော့ မျက်ရည်တွေ ဝေ့၀ဲလာမိသည်။ စာကျက်သံမကြားရ၍ ကြည့်မိတော့ သူမျက်နှာမှာလဲ မျက်ရည်တွေနှင့်။
“စာကျက်ပါဆို နင်ကဘာလို့ငိုနေရပြန်တာလဲ”
“ဆရာမ ငိုတော့ ကျွန်တော်လဲ ၀မ်းနည်းလို့ ပါ”
စိတ်ထဲမှာ မကောင်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ဒေါသဖြစ်မိသည်။ ကျောင်းသားကို စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရမည့် အစား ကိုယ့်အပြုအမူကြောင့် စိတ်ကျသွားနိုင်သည်။ ချော့မော့ပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ပြန်သင်တော့ တပုဒ်ပြီး တပုဒ် ချောချောမွေ့ မွေ့ ပြီးသွားသည်။ ပြီးတော့ သူက ပြောလိုက်သေးသည်။
“ဆရာမကို အားနာလို့စာကျက်တာ… နို့ မို့ ဂေါ်လီဆက်ရိုက်ချင်တာ” တဲ့။
မျက်တောင်တွေ မှေးစင်းပြီး မေးသမျှမေးခွန်းကို အိပ်ချင်မူးတူး အသံနဲ့ ဖြေနေသော ကိုတော်ချောကိုတာတေသည် ခုမှ ၈ တန်း စာမေးပွဲခန်းထဲက ထွက်လာတာနဲ့ မတူ။ အတော်ကို သွေးအေးလွန်းလှသည်။ ကိုယ်သာ သင်္ချာအားနည်းသည့် သူ့ အတွက် စိတ်တွေပူနေရသည်။ မှတ်လာသည့် အဖြေတွေက အကုန်တလွဲ။ ဒုက္ခ။ ဒီပုံစံဆို တာတေတော့ ဗုန်းကနဲကျပြီ။ ဝေ့၀ဲလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ဘယ်လိုမှထိန်းလို့ မရ။ တခြားဘာသာတွေ ကျန်သေးတာမို့သူ့ ကို မပြောရက်။
“ကဲကဲ… လာနောက်ဘာသာတွေ ကျက်ရအောင်”
ကိုယ့်ကို ကြည့်ပြီး သူပါ မျက်ရည်တွေ ၀ဲလာတော့ အံ့သြတကြီး မေးမိသည်။ သူလိုလူက စာမေးပွဲကျတာလောက်တော့ အရေထူပြီးသား။
“ဟဲ့… နင်က ဘာလို့ငိုနေတာလဲ”
သူဆီက မမျှော်လင့်တဲ့ အဖြေကြားရတော့ ကိုယ်လဲ အတော် ၀မ်းနည်းသွားမိသည်။ ဘာမှ စာဆက်မသင်နိုင်ပဲ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက် ငိုပွဲ ဆင်နွှဲနေတော့ အမေက မနေနိုင်။ ပြောနေကျ စကား တခွန်း ၀င်ပြောသည်။
“အဲလောက် စိတ်နုနေရင် ညည်း စာဆက်သင်ရင်တော့ နှလုံးရောဂါရမှာပဲ” တဲ့။
“ဆရာမ… ဆရာမ ကျွန်တော် စာမေးပွဲ အောင်တယ်”
မနက်စောစော မင်္ဂလာသတင်းကြားလိုက်ရတော့ အတော် စိတ်ချမ်းသာသွားသည်။ ကြားရတဲ့သူက ကိုယ်ဘယ်လိုမှ အောင်မယ်မထင်ထားတဲ့ တာတေဆီက။ ဥာဏ်ရည် သိပ်မထက်မြက်သည့်အပြင် မကြိုးစားတာကြောင့် သူ့ ကို ကျူရှင်ပြရတာ သူများထက် ပိုပင်ပန်းသည်။ သူ့ စာမေးပွဲ တလျှောက်လုံး ကိုယ်ပါအိပ်ရေးတွေပျက်။ တခါတခါ ကိုယ်က ရှေ့ က အားကြိုးမာန်တက် သင်နေသည်။ သူက အိပ်တွေငိုက်လို့ ။ ခုတော့ သူအောင်သွားပြီတဲ့။ အဲဒီကြည်နူးမှုက ဘာနဲ့ မှမတူ။ ထုံးစံအတိုင်း မျက်ရည်တွေက ဝေ့၀ဲလာပြန်သည်။
“ဟဲ့ တာတေ… စာမေးပွဲအောင်တာ နင်က ဘာလို့ငိုနေတာလဲ”
မေမေ့အသံကြားမှ သူငိုနေတာ သတိထားမိသွားသည်။
ဒီတခါတော့ ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ ကြားထဲက ရယ်မိသည်။
ဟိုတခေါက် မြန်မာပြည်ပြန်တော့ အမေက ကျွန်မ မမျှော်လင့်တဲ့ သတင်းတခုပြောပြခဲ့သည်။
“အမေရယ်… ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ…”
အတော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်။ အရင်အခေါက်တွေ ပြန်တုန်းက မော်တော်ပီကယ်လုပ်နေသည့် တာတေကို ကားနဲ့ ဖြတ်သွားတိုင်း နှုတ်ဆက်မိသည်။ အလုပ်အကိုင် အတည်တကျနဲ့မိဘလုပ်ကျွေးနေတာတွေ့ ရတော့ စိတ်ချမ်းသာမိသည်။ ခုတော့… အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆုံးပါးသွားရှာပြီ။ မျက်ရည်တို့ဝေ့၀ဲလာသည်။
အမေက ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် ဆိုသည်။
“ခုတော့… ဆရာမ ငိုလို့လိုက်ငိုမယ့်သူမရှိတော့ဘူးပေါ့အေ” တဲ့။
(ကျောင်း ၃ နှစ်ပိတ်လိုက်တုန်းက ကျွန်မ စာသင်ပေးခဲ့ရသည့် အသက်တိုရှာသည့် တပည့်ဟောင်းလေး တယောက်အကြောင်းပါ)
Posted by တန်ခူး at 11:12 AM 20 comments:
တခါလာလဲ ထမင်းဖြူ၊ တခါလာလဲ ထမင်းဖြူမို့ငြီးငွေ့ လာရင် လွယ်လဲလွယ်ကူ အချိန်ကုန်လဲ သက်သာတဲ့ ပဲထောပတ်ထမင်းလေး လုပ်စားကြည့်ပါလား။ တပြောင်းတလဲမို့စားလို့ မြိန်တာ အမှန်ပဲ။ ခုလို ပိတ်ရက်တင်မက ရုံးဖွင့်ရက်တောင် မြန်မြန်လေး ကဗျာကရာ ချက်လိုက်လို့ ရအောင်ကို လုပ်ရတာ အတော်လွယ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ လုပ်နည်းလေးကတော့….
Rice Cookerနဲ့ထမင်းလေးလုံးချက်အတွက်
၁) ကုလားပဲ လက်တဆုပ်
၂) GHEE ထောပတ်
၃) သစ်ဂျပိုး၊ ကုလားပွေးရွက်၊ နာနတ်ပွင့် အနည်းငယ်
၅) သီဟိုစေ့၊ နာနတ်သီးခြောက် …တို့ ပါပဲ… အားလုံးက အိမ်နားလေးက ဆိုင်လေးတွေမှာ အလွယ်တကူ ပြေးဝယ်လို့ ရပါတယ်…
ပထမဦးစွာ ကုလားပဲလေးကို ရေမြုပ်ရုံထည့်ပြီး Microwave ထဲ ထည့်ပြုတ်လိုက်ပါ။ Microwave ကျတော့ အနူးမြန်ပါတယ်။ သိပ်ကြီး မနူးအောင် ပြုတ်ပါ။ အရမ်းနူးသွားရင် ထမင်းထဲမှာ ပဲပုံပျက်သွားမှာပါ။
ထောပတ် ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်းလောက်ကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီး ထောပတ်ဆီ ဖြစ်တဲ့ အထိ ပူအောင်တည်ပါ။ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်နီဥကြီးကို ၈ စိတ်ခွဲ အဖတ်ကြီးလေးတွေ ရအောင်ခွာထားတာရယ်၊ သစ်ဂျပိုး၊ ကုလားပွေးရွက်၊ နာနတ်ပွင့် ရောထားတာရယ် ပေါင်းပြီး ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်နီဖတ် အနည်းငယ်နွမ်းလာလျှင် ပြုတ်ထားသောပဲပါရော၍ ဆီသတ်ပါ။ သကြား ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ ဆားသင့်ရုံထည့်ပါ။ ကြက်သွန်နီဖတ်လေးတွေ အနည်းငယ် ၀ါရောက်သမ်းလျှင် မီးပိတ်ပါ။ ကြက်သွန်နီက သာမာန်ဟင်းချက်သလောက် မနီရပါ။
ဆန်အဆင်သင့် ဆေးထားသည့်အိုးထဲသို့ကြက်သွန်ပဲရောဆီသတ်ထားတာရယ်၊ သီဟိုစေ့၊ နာနတ်သီးခြောက်ရယ် ထည့်ပြီး သမအောင် ရောမွှေ၍ ရေကို ပုံမှန်ထမင်းချက်တာထက် မဆိုစလောက် လျော့ထည့်ပြီး သာမာန်ထမင်းချက်နည်းအတိုင်း Rice Cookerနဲ့ ထည့်ချက်ပါ။ ထမင်းပွက်လျှင် နှစ်ခါသုံးခါလောက် မွှေမွှေပေးပါ။ Rice Cooker မီးပိတ်သွားလျှင် ပဲထောပတ်ထမင်းမွှေးမွှေးလေး အသင့်သုံးဆောင်နိုင်ပြီပေ့ါ။
ကျွန်မက ကြက်သားအာလူးဆီပြန်၊ မကျီးသီးစိမ်းငါးပိချက်၊ ဒညင်းဝှက်ကြော်၊ ပြီးတော့ အရည်သောက်ချက်ရမှာပျင်းသွား၍ အလွယ်တကူ စွန်တန်ဟင်းချိုလေးနှင့် အတူစားလိုက်တော့ တပွဲမက နှစ်ပွဲလောက်ထိ စားဝင်သွားသည်။ ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းချို (မဇနိပြောတဲ့ ယောင်ရိပ်မြင် ဟင်းချိုလေး)နဲ့ လဲ အလွန်လိုက်ဖက်ပါသည်။
ပိတ်ရက်မှာ စားကောင်းသောက်ဖွယ်များမြိန်လျှက်စွာ စားသုံးနိုင်ကြပါစေ။
(သင်ပြပေးသော ချစ်ညီမလေးအား ကျေးဇူးတင်လျှက်)
Posted by တန်ခူး at 8:35 AM 24 comments:
Posted by တန်ခူး at 1:02 PM 30 comments:
Posted by တန်ခူး at 9:50 AM 32 comments:
မ (မမေငြိမ်း) tag ထားတာလေး ရေးလိုက်ပါတယ်…( မ ရေ အမှတ်တရ tag ပေးတာ ကျေးဇူးပါ…) ဟိုးငယ်ငယ် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘ၀က အဲဒီလို ဆန်ဆန် အော်တိုလေးတွေ ရေးတာ လွမ်းသွားတယ်။ စာမျက်နှာတိုင်းမှာ ခေါင်းစဉ်လှလှလေးတွေနဲ့တယောက်ကို တကြောင်းရေးရတာလေ... ခေါင်းစဉ်လေးတွေ မှတ်မိနေသေးတယ်… “မိပေး ဖပေး နာမည်လေး” “မိမိမိုက်မိုက် သူငယ်ချင်း တသိုက်” “ခင်ဆုံး မင်ဆုံး အချစ်ဆုံး”… အဲဒီလို ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ … ။ tag ခံထားသူတွေ ရေးထားတွေ လိုက်ဖတ်တော့ ငယ်ငယ်က အော်တိုလေး ပြန်ဖတ်ရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်။ အင်း…ကိုယ့် ကွမ်းထုတ် ကိုယ်ဖြေ ရရင်တော့….
ကိုယ့်ရဲ့နာမည် - အမေပေးထားတဲ့ နာမည်ကတော့ တခုထဲပါ… ကိုယ့်ဘာသာ ဟိုလျှောက်ရေး ဒီလျှောက်ရေးဖို့ ပေးထားတဲ့ နာမည်တွေကတော့ လေးခုတောင်… ဒီထဲမှာ တန်ခူး ဆိုတာက တခုပေ့ါ။
ကိုယ့်ကိုသူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်တယ် - နာမည်ရင်းကို ခေါ်ကြတာများပါတယ်။ အင်း… ကွယ်ရာမှာတော့ Nickname ခေါ်ကြတယ်တဲ့…။
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ် - ကျွန်းသေးသေးလေးပေါ်က မီးခြစ်ဆံဗူးလေးထဲမှာ…။
ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းဆက်ချင်ရင် - စကားပြောရတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူဆိုတော့... အိပ်ချိန်ကလွဲ ကျန်တဲ့ အချိန် ဘယ်ချိန်ခေါ်ခေါ်။
အရောင်ဆိုရင် - အဖြူက ပထမ၊ အနက်က ဒုတိယ…။
အ၀တ်အစားဆိုရင် - မြန်မာရင်ဖုံးအကျီခပ်ပွပွ နဲ့မြန်မာချည်ထမီလေးတွေ…။
အစားအစာဆိုရင် - မုန့် ဟင်းခါး၊ လဘက်သုတ်…ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က လမ်းဘေးစာတွေ အကုန်ကြိုက်။
ပစ္စည်းဆိုရင် - ကလစ်လှလှလေးတွေ… နားဆွဲလှလှလေးတွေ။
သီချင်းဆိုရင် - နန်းတော်ရှေ့ သီချင်းတွေ… ရှေးက အငြိမ့်သီချင်းတွေ… မာမာအေးသီချင်းတွေ…ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက တူးတူး၊ ဟေမာ၊ မေခလာ… ဒီဘက်ပိုင်းရောက်တော့… ထူးအိမ်သင်၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ ခင်မောင်တိုး၊ မွန်းအောင်၊ IC တဖွဲ့ လုံး….ထွန်းအိန္ဒာဗိုနဲ့ တင်ဇာမော်…။
စာရေးဆရာ - ရေးလိုက်ရင် အတော်ရှည်သွားမှာ…။ ကြိုက်တဲ့သူတွေ အတော်များလို့ ပါ။
စာအုပ် - အပေါ်နဲ့ တူတူပဲ။
Life style - ငယ်ကတည်းက ကျောင်းမှာပျော်တယ်။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း ခုံမင်တယ်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရတာလဲ နှစ်ခြိုက်တယ်။ ခရီးသွားခြင်းကို ခုံမင်တာက မိဘတွေ ဆီက အမွေ။
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ - စိတ်ထဲရှိတာ လျှောက်ရေးတတ်တဲ့ စာရေးခြင်း။
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် - အိမ်လှလှလေးတလုံး။
ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူက - သားလေး၊ မိဘနှစ်ပါး၊ ခင်ပွန်း။
ကိုယ့်ရဲ့အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက - ကိုယ့်ပေါ် အမြဲကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းလေး။
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက - မိဘနှစ်ပါး နဲ့ခင်ပွန်း။ ပြီးတော့… ညီမထွေးလေး။
ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းဆုံးသူက - ကိုယ်ချင်းစာတရား ကင်းမဲ့တဲ့သူ။
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန် - သားလေးကို ခွဲခန်းထဲမှာ ပထမဆုံးတွေ့ လိုက်တဲ့ အချိန်…။
အကြောက်ဆုံးအချိန် - ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဝေးနေရမယ့် အချိန်…။
အမှတ်တရနေ့- သားလေးမွေးတဲ့နေ့ ။
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် တောင်းမဲ့ဆု - စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ ပါစေ…။
အချစ်ဆိုတာ - တခါတလေကျတော့ ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဘွယ်… တခါတလေကျတော့ ရူးလောက်အောင် ပူလောင်ရတယ်…။
အမုန်းဆိုတာ - မီးတစ။
အလွမ်းဆိုတာ - စားလဲဒီစိတ်၊ သွားလဲဒီစိတ်။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ - နှလုံးသားချင်း ချည်နှောင်ထားတဲ့ အရမ်းခိုင်ခန့် တဲ့ ကြိုးတချောင်း။
ဘ၀ဆိုတာ - နေတတ်ရင်တော့ ကျေနပ်စရာ။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ - ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ တွေ့ ရင် နွေးထွေးစွာ ဖေးမပြီး အောင်မြင်မှုတွေကိုလဲ မုဒိတာ ပွားနိုင်တဲ့သူ။
ချစ်သူဆိုတာ - ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတခု ပုံအပ်ရလောက်အောင် ရင်ခုန်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားမိသူ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီလိုထင်တယ် - စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း ၀ုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း ပြောတတ်သူ။ စိတ်တိုရင် အမြင့်ဆုံးထိတိုပြီး ချက်ချင်းဘုန်းကနဲ ပြန်ကျတတ်သူ။ သံယောဇဉ်ဖြတ်ခဲသူ။
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က - ဘယ်နေရာမဆို စေတနာမှန်ရင် အကျိုးပေးတယ်…။
အပြောချင်ဆုံးစကားတခွန်း - ကိုယ်ချင်းစာတရားလေး ထားကြပါ။
Posted by တန်ခူး at 3:29 AM 23 comments:
Posted by တန်ခူး at 2:13 PM 35 comments:
Posted by တန်ခူး at 10:44 AM 13 comments: